नेपाल टेलिकमको अटम अफर परिमार्जन, डाटा प्याक थप « Nagarik Khabar
नेपाल टेलिकमको अटम अफर परिमार्जन, डाटा प्याक थप
प्रकाशित मिति : 20 November, 2020 5:01 pm
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले हाल उपलब्ध गराइरहेको अटम अफर अन्तर्गतको प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्याकलाई थप सुविधा सहित केही परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित अफर आज शुक्रबार राती १२ बजे पश्चात लागु हुने जनाएको छ ।
हाल उपलब्ध भइरहेको प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्याक अन्तर्गत प्रतिदिन १ जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने गरी ७ दिनका लागि २५० रुपैयाँमा उपलब्ध भइरहेको प्याक र २८ दिनका लागि रु. ८५० मा उपलब्ध भइरहेको प्याकमा भ्वाइस सुविधा थप हुनेगरी नयाँ इको भ्वाइस प्लस डाटा कम्बो प्याक ल्याइएको हो ।
सो अनुसार इको भ्वाइस प्लस डाटा कम्बो प्याकअन्तर्गत २५० रुपैयाँमा प्रतिदिन १४ मिनेटको हिसाबले जम्मा ९८ मिनेट भ्वाइस कल र प्रतिदिन १ जिबी डाटाको हिसाबले जम्मा ७ जिबी डाटा ७ दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिने छ ।
यसैगरी रु. ८५० मा प्रतिदिन १४ मिनेटको हिसाबले जम्मा ३९२ मिनेट भ्वाइस कल र प्रतिदिन १ जिबी डाटाको हिसाबले जम्मा २८ जिबी डाटा २८ दिनभित्र प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड– १९ को प्रभावमा परेका क्षेत्रलाई पुनः उत्थानका लागि कर्जा
नेप्से नयाँ उचाइमा : आज २९ दशमलव ६८ अंकले वृद्धि
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचकले मंगलबार नयाँ उचाइ कायम गरेको छ ।
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौं । अघिल्लो हप्ता लगातार घटेको सुनको मूल्य आज ह्वात्तै घटेको छ । नेपाली बजारमा
वालिङ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशको समृद्धिका लागि पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक